Xayawaanka iyo dabiicadda | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah / Xirfadaha jaamiciyiinta / Xayawaanka iyo dabiicadda
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 26 6 2019
Waxa jira lix xirfadood oo ay xakamaysantahay u ehel noqoshadoodu oo dhinaca daryeelka caafimaadka iyo jirrada xawayaanka ah. Aqooyahannada beeraha, ugaadhsi-yaqaan, biyoolaji yaqaan iwm waxa quseeya qiimaynta Gudida jaamicadaha iyo jaamicadaha sare.
Xirfadaha ay xakamaysan tahay u ehel noqoshadoodu waxa qiimaynaya wakaaladda beeraha haddii waxbarashadaadu ku siin karto caddayn aqoonsi ama in ay caddayn aqoonsiga ku siin karto dhammaystirka ka dib. Qiimaynta ka dib waxad helaysaa jawaab ah in aad dalban karto caddayn aqoonsi, in aad marka hore u baahantahay dhammaystir ama in aanad heli karin ba cadday aqoonsi.​
Aqoonsiga iyo oggolaanshaha shaqaalaha caafimaadka xoolaha ka codso Hey’adda Beeraha boggeeda intarnetka. Adeeggan waxaa la helaa isagoo af Iswiidhish oo keliya ah.
Shaqaalaha caafimaadka xayawaanka
Waxa jira lix xirfadood oo ay xakamaysantahay u ehel noqoshadoodu oo ah dhinaca daryeelka caafimaadka iyo jirrada xayawaanka:
Dhakhtar xoolaad la aqoonsaday
Kalkaaliso caafimaadka xayawaanka ah oo la aqoonsaday
Daryeele qoob-fardood la ansixiyey (Godkänd hovslagare)
Kalkaalisocaafimaad oo la aqoonsaday
Dhakhtar jimicsi oo la aqoonsaday
Dhakhtar ilkood oo la aqoonsaday
Akhri dheeraad ku saabsan xirfadaha nidaamsan kuna qoran bogga Xirfada mutacalimiinta.
Akhri dheeraad ku saabsan shaqaalaha caafimaadka xayawaanka kuna qoran bogga intarnatka ee Hey'ada Beeraha.
Qiimaynta waxbarashada dalalka kale oo ku salaysan xirfadaha aan nidaamsanayn waxaa awood u leh Goleha jaamacadaha iyo kulliyadaha (Universitets- och högskolerådet).
Marka aad hesho qiimaynta iyo aqoonsi-siinta waxbarashadaada, waxad toos u geli suuqa shaqada ama waxad sii dhigan waxbarasho dhammaystir ah si aad u wanaajiso fursadahaaga shaqo.
Xiriirka bogagga kale ee internetka
Jaamacada beeraha ee Iswiidhan (SLU) Waxbarasho dheeraad ah, dhakhtarka xoolaha